क्यासिनो एक विश्वव्यापी घटना बनिरहेछन्, भव्य र विलासी क्यासिनो संसारको सबै कुनामा देखिन्छन्, र त्यो बिना भनेको हो बुल्गेरिया, जसले देशको राजधानी र ठूला शहरहरूमा प्रीमियम टेबल्समा उनीहरूको हात प्रयोग गर्न विनिमय दरहरूको कारण पूर्वी यूरोपीय देशको लागि बाढी आएको पर्यटकबाट फाइदा उठाइरहेको छ। यहाँ केहि सुझावहरू छन् जुन हामीलाई लाग्छ केही राम्रा बुल्गेरिया क्यासिनोहरू हुन्:
शीर्ष १० बल्गेरियाली अनलाईन क्यासिनो साइटहरू एक नयाँ बोनसको साथ!
शीर्ष १० बल्गेरियाली अनलाईन क्यासिनो साइटहरू एक विशाल बोनसको साथ!
बुल्गारियामा अनलाइन जुवा: मामिलाहरूको हालको अवस्था
BG झण्डा प्रतिमा बल्गेरियामा अनलाइन जुवा मार्केट पूर्ण रूपले नियमन गरिएको छ। २०० 2008 देखि जबदेखि युरोपियन दिशानिर्देशहरूसँग मेल खाने जुवा सम्बन्धी कानूनहरू अद्यावधिक गरिएको थियो, देशले बजारलाई उद्योगमा ठूला नामहरूको लागि अझ आकर्षक बनाउन समय-समयमा अपडेट गर्दै आएको छ। दुबै अनलाइन क्यासिनो र खेल सट्टेबाजी बल्गेरियामा वैध छन्, र खेलाडीहरूले छनौट गर्न धेरै छ। जुवा राज्य राज्य आयोग देश मा जूवा के सबै मामिलाहरु नियमन प्राधिकरण हो र सीधा वित्त मन्त्रालयको अधीनमा छ। २०० 2008 मा अपनाइएको पहिलो जुवा कानून २०१२ देखि लागू गरिएको थियो। यद्यपि, करको स्तर आकाश-उच्च थियो, धेरै ठूला खेलाडीहरूलाई टाढा राखेर।
२०१ 2013 मा करलाई थोरै चिह्नले बुल्गेरियालाई दुबै स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय अनलाइन क्यासिनोहरूको लागि अत्यन्तै आकर्षक बजार बनायो, वाइबुलगेरियाको फ्ल्याग SVGth अनलाइन जुवा इजाजतपत्र दुबै अपरेटरहरू र खेल प्रदायकहरूको लागि जारी भैरहेको छ। यी मध्ये क्यासिनो टेक्नोलोजी र ईजीटी स्थानीय ब्रान्ड हो जसले प्रदायक उद्योगमा आफ्नो नाम कमाउन सफल भएका छन्, सबै यूरोपभरि अनलाइन र अफलाइन वातावरण दुवैका लागि क्यासिनो खेलहरू आपूर्ति गर्दै।
के त्यहाँ कुनै लाइसेन्स अपरेटरहरू छन्?
इजाजतपत्र क्यासिनोहरू, त्यहाँ छन्। हाल यस क्षेत्रमा अवस्थित कुनै पनि कम्पनी वा अन्य कुनै ईयू देशले बल्गेरियाको अनलाइन जुवा इजाजतपत्रको लागि आवेदन दिन सक्छ। इजाजतपत्रको लागि आवेदन दिन बीजीएन १०,००,००० को एक निश्चित कर छ, र १० बर्षे इजाजत पत्र प्राप्त गर्ने अपरेटर्सले सकल गेमि revenue राजस्व (GGR) मा २०% कर तिर्नु पर्छ। र अनलाइन जुवा खेल्ने क्रममा, त्यहाँ एक प्रकारको इजाजतपत्र छ, जब भूमिमा आधारित गतिविधिहरूको बारेमा कुरा गर्दै, प्रत्येक जुवा उत्पादनको आफ्नै इजाजतपत्र हुन्छ। अपरेटर्सहरू जुन विभिन्न प्रकारका जुवा गतिविधिहरू प्रस्ताव गर्न चाहन्छ उसले प्रत्येक अपरेशनको लागि आवेदन शुल्क लिन र भुक्तान गर्नुपर्नेछ।
जुवा राज्य राज्य आयोगले लाइसेंस विना अपरेटरहरु अझै पनि बल्गेरियाली खेलाडीहरु सम्बोधन गर्न एक धेरै कठोर व्यवहार देखायो। एक कालोसूची जबदेखि जुवा कानूनहरू अद्यावधिक भएका थिए, र सूची प्रत्येक महिना ठूलो र ठूलो हुँदै जान्छ। कालोसूचीमा थपिएको कुनै पनि कम्पनीले इजाजत पत्र प्राप्त गर्न सक्नेछैन। साथै, खेलाडीको दृष्टिकोणबाट चीजहरूलाई हेरेर, बल्गेरियामा जूवा खेल्ने कानुनी उमेर १ is हो, र सबै क्यासिनो उत्साहीहरूले यो पत्ता लगाउन रमाउनुपर्दछ कि अनलाइन जुवाबाट जितेको करलाई कर लगाउँदैन।
बुल्गारियामा अनलाइन क्यासिनोहरू: तपाईंसँग के विकल्पहरू छन्?
परिक्षण-आइकन-ट्रान्सडिसन जुवामा राज्य आयोगको प्रयास बिना इजाजतपत्र विना अपरेटरहरुलाई रोक्न, यो व्यावहारिक रूपमा असम्भव छ पुलिस लाई इन्टरनेट गर्न। त्यसकारण बुल्गारियामा अनलाइन क्यासिनो अफिसिआनाडोस जहिले पनि स्थानीय रूपमा इजाजतपत्र अपरेटरहरू वा अन्तर्राष्ट्रिय साइटहरूमा बुल्गारियनहरू स्वीकार गर्न छनौट गर्न सक्दछन्। यहाँ छ कि प्रत्येक कोटीले तालिकामा के ल्याउँछ र कसरी पक्का गर्नको लागि तपाईले सधैं एक अद्भुत अनुभव प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ।
बल्गेरियन क्यासिनो खेलाडीहरूको लागि कानूनी र निष्पक्ष गेमिंग
क्यासिनोहरू प्रतिष्ठित एजेन्सीबाट लाइसेन्स हुनुपर्दछ, जस्तै कुराकाओ ई गेमि and र माल्टा गेमि Authority प्राधिकरण। वा, ती सबैको सबैभन्दा प्रतिष्ठित, the संयुक्त राज्य जुवा आयोग। तर राम्रो इजाजतपत्र हुनु पर्याप्त छैन, क्यासिनोले खेलको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्नुपर्दछ स्वतन्त्र अडिसन एजेन्सी, जस्तै TST ल्याबहरूसँग काम गरेर। तपाईं माथिको सूचीबाट बल्गेरियाई अनलाइन क्यासिनोहरूको लागि शीर्ष छनौटहरू सुरक्षित रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, जससँग मान्य इजाजतपत्रहरू छन् र जहाँ तपाईं बल्गेरियाको इलाकामा पूर्ण सुरक्षा र सुरक्षा सर्तहरूमा खेल्न सक्नुहुनेछ।
शीर्ष अनलाइन क्यासिनो बुल्गारिया सूची
अब यो सूचीलाई कार्यमा हेर्ने समय आएको छ: हामीले तपाईंको लागि शीर्ष बुल्गारिया अनलाइन क्यासिनोहरू छान्नुभयो र तिनीहरूलाई तल सूचीबद्ध गर्नुभयो। नोट गर्नुहोस् कि यी साइटहरू केहि देश बाहिरका कम्पनिहरू द्वारा संचालित छन् तर तिनीहरू अझै बल्गेरियन सदस्यहरू स्वीकार्छन् र माथिका सबै मापदण्डहरू पूरा गर्दछन्। क्यासिनो बल्गेरिया खेल्न रूले अनलाइन वा क्यासिनो बुल्गारिया अनलाइन पोकर खेलहरू, उदाहरणका लागि, यी उत्तम विकल्पहरू तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। ती मध्ये कुनै पनि छान्नुहोस् र आफ्नो भाग्य प्रयोग गर्न सुरू गर्नुहोस्: हामी ग्यारेन्टी दिन्छौं कि तपाईंले यस अनुभवलाई पछुताउनु पर्दैन। बुल्गारियामा अनलाइन जुवा र बल्गेरियाली खेलाडीहरूको लागि विशेष जुवा सल्लाहहरूको बारेमा अधिक पत्ता लगाउन, पढ्न जारी राख्नुहोस्। ओह र एउटा कुरा: क्यासिनो बुल्गारिया अनलाइन रूलेट खेलहरू र त्यस्तै खेल्दा, हाम्रो विस्तृत खेल मार्गनिर्देशहरू पढ्न नबिर्सनुहोस्। उदाहरण को लागी, हामी संग उत्कृष्ट गाइड छ Baccarat.
के अनलाइन क्यासिनो बुल्गारिया साइट कानूनी छन्?
वा, बल्गेरियामा अनलाइन क्यासिनो कानूनी छ? हामीले माथि उल्लेख गरेझैं बल्गेरिया ती देशहरूमध्ये एक हो जुन अनलाइन जुवा अनुमति दिन्छ। २०१ 2018 देखि, यस देशका सबै प्रकारका जुवाहरू कानूनी छन्: अनलाइन क्यासिनो, खेल सट्टेबाजी, लटरीहरू, र कल्पना खेल शर्त पनि। जब सम्म तपाईं जुवा राज्य स्टेट कमीशन (वित्त मन्त्रालय) बाट एक लाइसेन्स प्राप्त गर्नुहुन्छ राम्रो हुनुहोस्। यसबाहेक, तपाईलाई बुल्गारियाको नागरिक हुनु आवश्यक पर्दैन: तपाईले माल्टामा पसल सेटअप गर्न सक्नुहुनेछ, उदाहरणका लागि र अझै पनि यो इजाजत पत्र पाउनुहोस्। २०.०० र १००,००० LEV बीचको लाइसेन्सको शुल्क परिवर्तन हुन्छ, त्यसैले तिनीहरू पनि मूल्यवान हुँदैनन्।
राम्रो लाग्दछ, हैन? तर यस उद्योगका ठूला अपरेटरहरू अझै पनी यस देशमा कुनै स्थानीय अपरेसन छैन। यसका लागि दुई मुख्य कारणहरू छन्:
यदि आवेदक बुल्गारियाको नागरिक होईन भने उसले १०,०००,००० युरो बराबरको मुलुकमा लगानी गर्नुपर्नेछ र 10.000.000०० व्यक्तिलाई रोजगार दिनुहोस्।
सबै आवेदकहरूले आफ्नो आयको २०% करको रूपमा दिनु पर्छ।
कर दर यत्ति उच्च छैन, वास्तवमा, यो अपतटीय टापुहरू भन्दा झन्डै कम छ। यद्यपि विदेशी कम्पनीहरूका लागि लगानीको आवश्यकता डिल ब्रेकर हो। साधारणतया, बल्गेरियाली सरकारले भन्छन “तपाईले तपाईको मुख्यालय अफशो टापुमा राख्न सक्नुहुन्छ - मलाई मतलब छैन। तर यदि तपाईं यो इजाजतपत्र चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले मेरो देशमा लगानी गर्नुपर्छ। ” कुरा के हो भने त्यहाँ त्यहाँ धेरै अपरेटरहरू छैनन् जो यस किसिमको लगानी गर्न इच्छुक छन्, १० करोड यूरो एक प्रकारको “ठूलो पैसा” हो। त्यसकारण, बुल्गारियामा हालको स्थानीय अनलाइन क्यासिनोहरू केवल स्थानीय व्यवसायहरू द्वारा संचालित छन्। जे होस्, स्थिति त्यो खराब छैन: केहि ठूला ब्राण्डहरू बल्गेरियाली बजारमा प्रवेश गर्न लागेका छन्, जुन तल उल्लेख हुनेछ। यसबाहेक, अफशोर जुवा साइटहरूमा त्यहाँ कुनै प्रतिबन्ध वा सेन्सरशिप छैन, बल्गेरियाली खेलाडीहरू आफूले चाहेको कुनै पनि साइटमा जूवा खेल्न स्वतन्त्र छन्।
शीर्ष १० बल्गेरियन अनलाइन क्यासिनो साइटहरू अपडेट गरिएको: जुन 8, 2020 लेखक: Damon
1 शीर्ष १० बल्गेरियाली अनलाईन क्यासिनो साइटहरू एक नयाँ बोनसको साथ!
1.1 शीर्ष १० बल्गेरियाली अनलाईन क्यासिनो साइटहरू एक विशाल बोनसको साथ!
2 बुल्गारियामा अनलाइन जुवा: मामिलाहरूको हालको अवस्था
3 के त्यहाँ कुनै लाइसेन्स अपरेटरहरू छन्?
4 बुल्गारियामा अनलाइन क्यासिनोहरू: तपाईंसँग के विकल्पहरू छन्?
5 बल्गेरियन क्यासिनो खेलाडीहरूको लागि कानूनी र निष्पक्ष गेमिंग
6 शीर्ष अनलाइन क्यासिनो बुल्गारिया सूची
7 के अनलाइन क्यासिनो बुल्गारिया साइट कानूनी छन्?
कालो कमल कुनै जम्मा बोनस अप्रिल 2020
शीर्ष १० बल्गेरियन अनलाइन ...